သူစွပ်စွဲတဲ့အချက်အလက် တွေကို တစ်ခုချင်းစီကို သူငယ်ချင်း မှ ထောက်ပြခဲ့ တာကြောင့် ပို့စ်ကိုချက်ချင်းဖျက်ပြီး မသိကျွေးကျွန်ပြုနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်… – CELE WINGAGAR
သူစွပ်စွဲတဲ့အချက်အလက် တွေကို တစ်ခုချင်းစီကို သူငယ်ချင်း မှ ထောက်ပြခဲ့ တာကြောင့် ပို့စ်ကိုချက်ချင်းဖျက်ပြီး မသိကျွေးကျွန်ပြုနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်…
December 6, 2021 100million Articles 0
သူစွပ်စွဲတဲ့အချက်အလက်တွေကို တစ်ခုချင်းစီကို သူငယ်ချင်းမှ ထောက်ပြခဲ့တာကြောင့် ပို့စ်ကိုချက်ချင်းဖျက်ပြီး မသိကျွေးကျွန်ပြုနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်
ပရိသတ်ကြီးရေ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ သူ့ရဲ့myday တွေကို သူငယ်ချင်းမှ Cele Spy Small ဆိုတဲ့ Page ကိုဖောက်သည်ချခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ အခုလို ရေးသားထားပါတယ်။ ”
ရန်ပိုင်စိုး(Liam) မင်းငါ့နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးရတာ မပြီးတော့ဘူးလားကွာမင်းမမောသေးဘူးလားမင်းလုပ်နေတာတွေငါအကုန်သိတယ်…..ငါစိတ်ထဲမှာထင်နေလို့ ငါ့ story ကို custom လုပ်တင်လိုက်တာ နောက်နေ့ မင်းရဲ့ “ Cele Spy Small “ ဆိုတဲ့ page မှာငါထင်တဲ့အတိုင်းချက်ချင်းတက်လာတယ်သားကြီးရာ.. ငါတို့ခင်မင်မှုကို မျက်နှာထောက်ပြီး မတင်ဖို့လုပ်ထား
ပေမယ့် ပိုပြီး ဆိုးလာလို့ တင်မှရတော့မယ် သားကြီးရေ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် အားလုံးစိတ်ညစ်နေကြချိန်မှာ ငါ့ကိုနင်းပြီးမှမင်း page ကို followers ရှာတာတွေ ရပ်သင့်ပါပီ သူငယ်ချင်းရာဒီထက်ရှင်းတာ မရှိတော့ပါဘူးမင်းဟုတ်မဟုတ် ငါစမ်းကြည့်တာ မင်းငြင်းခြင်သေးလား? နိုင်ငံရေးကြောင့် အားလုံးစိတ်ညစ်နေကြတဲ့အချိန် ဒီပိုစ်ကိုတင်ရလို့ အားလုံးကိုတောင်
းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ🙏🏻“ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမှလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ဖြေရှင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” ကိုယ့်စကားကိုတာဝန် ယူပြီး စုံစမ်းလို့ ငါမဟုတ်ရင် ပြန်တောင်းပန်ပါ 🙃ဒီ ကိစ္စကို မရေးတော့ဘူး မရှ င်းတော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် မဟုတ်ပဲ အစွပ်စွဲ ခံရတဲ့ အတွက် အရမ်း အသဲနာလို့ပါ ။ liam တစ်ယောက်
တည်း အေးဆေးနေနေတာ အချိန်ကာလ တစ်ခုရှိပါ ပြီ။ အုပ်စိုးခန့် နဲ့ အရင်က အရမ်းခင်ခဲ့တယ် ။ ခုထိလည်း ညီအကိုလို သူငယ်ချင်းလိုစိတ်ထဲ ရှိတုန်းပါပဲ ။ ဒီနေ့ မနက် ၉ နာရီလောက်ကြီး အိပ်နေတုန်း သူ့အဖေက ဖုန်းဆက်လာပါတယ် ။ ”မင်း ငါ့သားကို အပုပ်ချ နေတာတွေ ရပ်ပါတဲ့” ။ liam လည်း တကယ်ဘာပြောမှန်း မသိလို့ ကြောင်သွားပါတယ်။ cele spy
small page မှာ ရေးတင်နေတာတွေ မင်းလေ တဲ့ ။ မဟုတ်ဘူး လူမှား နေ ပြီဆိုပြီးတော့ ရှ င်း ပြပြီး မိဘနဲ့ တောင်ကျိန်ဆိုပြီး လူကြီးကို ရိုရိုသေသေပြန်ပြောခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒါကို သူ့အဖေက သူ့မှာ သက်သေ ရှိတယ် ဆိုပြီး ပြောတယ် ။ သက်သေရှိရင် လူအမှန် ကို ရှာပြီး လုပ်ပေးပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။သူဖုန်းချသွားတာနဲ့ အဲ့ page ကို ဝင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
တော် တော် shock ရသွားပါတယ် ။ liam ပုံတွေနဲ့ အုပ်စိုးခန့် အကြောင်းကို sex ကိစ္စတွေ မဟုတ်မမှန် ရေးထားတာတွေ တွေ့တော့ တကယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် သူ့အဖေ ကိုပါ ။ ငါ့ကိုများ ဘာလို့ ဒီလို ထင်ရက်တာလဲပေါ့ ငါကိုတိုင်လဲ အဲ့ မှာ အပြောခံရတဲ့ သူလေ အဲ့ဒါကို ဘာလို့ငါ့ကို ထင်တာလဲပေါ့ ငါ့ မှာလည်း ငါ့ family , society ဆိုတာ ရှိတယ်
လေ အဲ့လိုကြီး ရေးတင်ရင် ငါ့စောက်ရှက် ငါခွဲသလို ဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့ ထင်တဲ့ သူတွေ ကို အံ့သြတဲ့ စိတ်နဲ့ သူ့အဖေကို ဖုန်းပြန်ဆက်ပြီး အေးဆေးပြောပြခဲ့တယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဘာလို့ ငါလို့ ထင်တာလဲ ငါ ဘာများ မှားလို့ လဲ ဆိုပြီး တော်တော် စိတ် မကောင်းဖြစ်လို့ သူ့အမေ သူ့အမ သူ့ဆီရော စာပို့ပီး ပြောခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒါကိုမှ ငါလို့ထင်နေတာ တော်တော်
အံသြမိတယ် ။ ငါဘာလုပ်လို့လဲ ။ တကယ်လို့ ငါသာ ဆိုရင် တိကျ မှန် ကန်တဲ့ source တွေနဲ့ ရေးမှာပေါ့ ။ ငါ့ စောက် ရှက် ငါ ပြန်ခွဲပါ့မလား. စဉ်းစားကြည့်လေ ဦး နှောက် ပါတဲ့ သူတိုင်း. ၊ ကိုယ်တိုင်က ဆယ်လီ မဟုတ်လို့ ဘာမှ မပြောပဲ ဒီတိုင်းထားလိုက်ချင်ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် သူ့ကိစ္စကို liam လုပ်တယ်ထင်ပြီး ပြောတာ တော်တော် အံ့သြပါတယ် ။ ငါမဟုတ်တာ
သေချာတဲ့ အတွက် ကြောင့် အမှန် တရား ရှာတွေ့ရင် တောင်းပန်ပါ ။ လူဆိုတာ အထင်နဲ့ စော်ကားချင်းတိုင်း စော်ကားလို့မရပါဘူး။ မင်းနာမည်ကြီးတာမင်း ဘာမင်း ကြီးတာပါ ။ မင်းကို အဲ့လို မဟုတ်က ဟုတ်က တွေရေးပီး ငါ့ page ကို follower တိုးစေချင်ရင် ၊ ငါ့စောက် ရှက် လဲ ငါ ပြန် ခွဲ မနေဘူး မင်းအကြောင်းလဲ ရေးစရာမလိုဘူး ငါ့ မှာ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်
အသိတွေ အများကြီး ရှိတယ် သူတို့နဲ့ ပဲ vlog တွေ ပတ်ရိုက်နေမှာပေါ့ ။ မင်းမှာတင် family ရှိတာ မဟုတ်ဘူး ငါ့မှာလဲ မိသားစုရှိတယ် မြေနိမ့်ရာ လှံ မစိုက်ချင်ပါနဲ့ ငါ့ ဘဝ၊ ငါ့ မိဘ နဲ့ ကျိန်ရဲတယ် ဒီကိစ္စငါလုံးဝ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ၊ ဝဋ်ဆိုတာ လည်တက်ပါတယ် ငါ့ဘက် မှာ အမှန် တရားရှိတယ် ။ 👋>> Story custom မှာ ငါ့ကို ထည့်ထားလို့ အဲ့ SS တွေ အပြင်ကို
ပေါက်ကြားတာ ငါလို့ထင်ရင်တော့ မင်းအရမ်းမှားသွားပြီ သားကြီး
အခု ချိန် မှာ တကယ် လုပ်တဲ့ သူက ဟားတိုက်ရီနေတော့မှာ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။celeupdatenews
ခ်စ္သူေနေဒြးကို ဓာတ္ပံုလွလွေလး႐ိုက္ခိုင္း လိုက္ရာ စေကးေတြကအထာက်လြန္းေနတာေၾကာင့္ ရယ္ရခက္ငိုရခက္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနေဒြးရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္မေလး
ကြည့်မြင်တိုင်တွင် ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စအား ဝမ်းနည်းခြင်း လုံးဝ မရှိဘဲ နှုတ်ပိတ်နေတာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်